कपाल झरेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस् यी ९ समस्याले ग्रसित भएमा झर्ने गर्छ कपाल – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/कपाल झरेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस् यी ९ समस्याले ग्रसित भएमा झर्ने गर्छ कपाल
4,0982minutes read
कपाल झरेर हैरान भइयो के गर्ने ? अहिले यस्तो गुनासो बाक्लिदै गएको छ ।कपाल झर्नु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, अस्वभाविक रुपले कपाल र्झछ भने त्यो चिन्ताको विषय हो । कपाल झर्ने क्रम रोकिएन भने टाउको मुडुलो हुन्छ । यो भनेको समग्र सौन्दर्यकै लागि जटिल कुरा हो ।
आजभोलि नुहाएपछि कपाल सुकाउनका लागि प्रायले हेयर ड्राइअरको सहायता लिने गर्छन् । यो कपाल सुकाउन र हेयरस्टाइल बनाउनको लागि त तरिका हुन सक्छ । तर, कपालको स्वास्थ्यको लागि पनि त्यत्तिकै हानीकारक । अनुसन्धानले नै भनेको छ की कपाल बनाउनका लागि हरेक दिन यस्ता सामाग्रीको प्रयोग गर्दा कपाल विग्रीदै जान्छ । लगातार आफ्नो कपाललाई सिधा या घुम्रो बनाउने उपचार नै कपाल झर्नेको प्रमुख कारण बन्न सक्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **